Xarun ka shaqeyn doonto hal-abuurka deegaanka oo laga hirgaliyay Muqdisho “SAWIRRO” | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Xarun ka shaqeyn doonto hal-abuurka deegaanka oo laga hirgaliyay Muqdisho “SAWIRRO”
MUQDISHO (SONNA)- Kullan xariga looga jarayay xurun cusub oo loogu magac daray Eco-Hub Somalia, ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Daah Furkaan ayaa waxaa ka soo qeyb galay qeybaha kala duwan ee Bulshada, Siyaasiyiin iyo qaar ka tirsan Aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Muqdisho ku nool.
Eco-Hub Soomaaliya ayaa noqoneysa xaruntii ugu horreysay ee deegaan iyo bey’adeed ee nooceeda oo kale ka shaqeysa lagana hir-galiyo Soomaaliya, iyada oo u jeedkeedu yahay dhowrista kheyraadka dabiiciga ah iyo bey’ada si loo abuuro jawi saaxiibtinimo bey’adeed, wacyigelin iyo dhiirrigelinta hal-abuurka ganacsi ee wax u taraya deegaanka kuwaa oo u baahan dhiirigalin iyo maalgalin.
Sidoo kale waxay xaruntan tababaro ku aadan ka shaqeynta Nadaafada iyo Ganacsiyada yar yar kuwooda u wanaagsan deegaanka, soo saarista Cilmi-baarisyo ku aadan dhibootooyinka deegaanka, iyo yareynta shaqo la’aanta bulshada gaar ahaan dhalinyaradda iyo haweenka.
Agaasimaha Eco-Hub Somalia Cali Faarax oo ka hadlay munaasabada ayaa ku soo dhoweeyay xarunta ka qeyb galayaasha, isagoo xusay in xaruntaan deeegaan ay aasaaseyn dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka damqaday dhibaatada deegaan, qashin iyo shaqo la’aan ee heysato dadka iyo dalka Soomaaliyeed, isaga oo xusay in xaruntaan loo furay bulshada soomaaliyeed. Waxa kale oo uu sheegay in Eco-Hub Somalia ay soo kordhin doonto howlo ay ku farxaan Bulshada Soomaaliyeed, sidoo kalena dhiireglin iyo tababar ay siin doonto qof walba oo la yimaada hal- abuur ganacsi kaas oo la saaxiib ah deegaanka.
Dhamaan hal-abuurada qeybta ka ahaa bandhig carweedka ayaa mid mid madashada qudbado kooban ka jeediyay iyaga oo kaga sheekeeyay waxa ku dhaliyay hal-abuurkooda ganacsi ee deegaanka la saaxibka ah, sida ay ku hirgaliyeen iyo sida u shaqeeyo ganacsigooda iyo caqabadaha ku geedaaman hirgelinta hal-abuurkooda.
Hal-aburada ayaa tilmaamay muhiimada ay howlahooda ganacsi ku dhowrayaan deegaanka iyo shaqo abuurka ba’.
Hal-abuurada ayaa madasha ka sheeegay in ay caqabad ka heysato dhanka iska warqabid la’aanta ka dhaxeysa dhanka wax-soo-saarkooda iyo bulshada inteeda kale oo ay jirto ogaansho dari iyo dadka Soomaaliyeed oo wali ku baraarugsaneyn muhiimada ay leedahay in ay dib u iibsadaan walxaha la isticmaalay ka dibna tuuray in mar kale ay dib u iibsadaan una aisticmaalan si loo yareeyo qashimeynta magaalada iyo waliba dhowrista deegaanka.
Previous articleSaraakiil ka tirsan Booliska Amisom oo booqday xarunta doorashada Jubaland
Next articleCiidamada Xoogga dalka oo deegaano cusub kala wareegay argagixisada Al-Shabaab